Akụkọ - Okwu Mmalite nke chlorine dioxide
Carbonate nke Strontium
Ọkụ Ọkụ Crucible
Mbadamba chlorine dioxide
Chlorine dioxide Otu Akụrụngwa ntụ ntụ
Chlorine dioxide Akụrụngwa Abụọ
Chlorine Dioxide Sachet 20G (Mgbatị-ịhapụ)
Chlorine dioxide Sachets 20G (Ngwa-ngwa ngwa)
Chlorine Dioxide Gel ntụ ntụ
Chlorine Dioxide Ikuku Sanitizer
Okwu mmalite nke chlorine dioxide
Chlorine dioxide (ClO2) bu odo odo-nwere odo odo nwere onwu yiri nke chlorine nwere ezigbo nkesa, ikike ịbanye na igba ogwu n'ihi oke ikuku ya. N’agbanyeghi na chlorine dioxide nwere chlorine n’aha ya, ihe ya nwere di iche, odi ka carbon dioxide di iche na carbon element. Chlorine dioxide amatala dị ka disinfectant kemgbe mmalite 1900s ma ndị US Environmental Protection Agency (EPA) na US Food and Drug Administration (FDA) kwadoro ya maka ọtụtụ ngwa. Egosiputala ya nke oma dika uzo di iche-iche, mgbochi mkpali, bactericidal, fungicidal, na virucidal agent, tinyekwara onye na enye ahu oku, ma nwekwa ike inactivate beta-lactams ma bibie ma pinworms na akwa ha.
Ọ bụ ezie na chlorine dioxide nwere “chlorine” n’aha ya, kemistrị ya dị iche na nke chlorine. Mgbe ị na-emeghachi omume na ihe ndị ọzọ, ọ na-esighị ike ma họrọ karịa, na-enye ya ohere ka ọ bụrụ nke na-arụ ọrụ nke ọma ma dị irè. Dịka ọmụmaatụ, ọ naghị emeghachi omume na amonia ma ọ bụ ọtụtụ ogige ndị na-edozi ahụ. Chlorine dioxide na-eme ka ngwaahịa ghara ịdị na-ekpokọta ha, ya mere n'adịghị ka chlorine, chlorine dioxide agaghị emepụta ogige ndị na-adịghị mma na gburugburu ebe obibi nke nwere chlorine. Chlorine dioxide bụkwa mmanụ na-acha odo odo na-acha odo odo na-enye ya ohere iji tụọ ya na ezigbo oge na ngwaọrụ photometric.
A na-ejikarị chlorine dioxide eme ihe dị ka antimicrobial na dịka ihe na-egbu egbu na mmiri ọ drinkingụ drinkingụ, mmiri ọkụkọ mmiri, ọdọ mmiri, na nkwadebe ọnụ. A na-eji ya nsị mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri yana akụrụngwa maka nhazi ihe ọ andụ beụ na ihe ọ andụverageụ na ebe a na-ejikwa ya n'ụlọ akwụkwọ nyocha sayensị. A na-ejikwa ya na ụlọ ọrụ ahụike ka imetọ ụlọ, passthroughs, ndị na-ekewapụ onwe ha nakwa dịka sterilant maka ngwaahịa na ịgba ọgwụ mgbochi. A na-ejikwa ya ịcha ọcha, deodorize, ma kpochapụ ọtụtụ ihe dị iche iche, gụnyere cellulose, mpempe akwụkwọ, ntụ ọka, akpụkpọ anụ, abụba na mmanụ, na textiles.
Post oge: Dec-03-2020
E guzobere ụlọ ọrụ anyị na 2005 na isi ụlọ ọrụ dị na shijiazhuang nke bụ ebe mara mma nke China. Isi azụmaahịa gụnyere mmepụta na ọrịre nke kemịkal kemịkalụ na nnụnụ ọkụ na-eri ihe site na ngwaahịa, yana mbupụ nke teknụzụ chlorine dioxide ……
Holọ Zhongyuan No.368 Youyi North Street Shijiazhuang China
Skype: jamesyang 1018